अनि बादल फलामको कुर्सीमा बसे ! - Himali Patrika
अनि बादल फलामको कुर्सीमा बसे !
हिमाली पत्रिका १० भाद्र २०७८, 4:48 pm
त्यतिञ्जेल पनि मञ्चमा ओलीको आगमन भएको थिएन । बरु माधव नेपालको साथ छोडेका एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल कार्यक्रममा आइपुगे । केही समय रावलले पनि कुर्सीको खोजीमा यताउता हेरे । पहिलो लहरमा नेताहरु बसिसकेका थिए । तर, रावलले ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल बसेको सोफामा नजर लगाए ।
मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेपछि पूर्व माओवादी नेताहरुको जिम्मेवारी पनि खोसिएको छ । नेकपाकालीन समयमा तेस्रो नेताको हैसियत पाएका बादल यतिबेला ८ औं वरियतामा झरेका छन् ।